Ama-robot ama-smartest angu-5 emlandweni
Emafilimu efilosofi esayensi, ama-robot aboniswa njengezidalwa ezithile zekusasa, ezikwazi ukuhamba emilenzeni emibili nokucabanga njengabantu. Noma kunjalo, ukudweba kwe-cinematographic akuyona inembile ngokuphelele. Eqinisweni, sisebenzise ama-robot isikhathi eside, kodwa babheka okuhlukile. Lezi zitholakala ekuqaleni kwekhulu le-XIX, imicibisholo yokuhamba kweMpi Yezwe Yesibili, ama-dishwashers anamuhla. Ngisho namawashi ethu ama-alamu yimisebenzi emincane kulandela uhlelo olufakiwe ukusivuselela ngesikhathi esifanele. Nokho, njengoba umlando we-robotics ubonisa, asikho kude kakhulu neqiniso lezesayensi. Nazi ama-robot angu-5 ahlakaniphile kakhulu adalwe ngumuntu eminyakeni engu-50 edlule.
I-Robot Eliza, enye yezingxoxo zokuqala ezibonakalayo, yasungulwa yikwazi emkhakheni wokuhlakanipha okufakelwa nguJoseph Weizenbaum. Uhlelo lwesosayensi waseMelika lulingisa lochwepheshe. U-Eliza uyakwazi ukuphendula imibuzo, futhi ubuze umsebenzisi. Eqinisweni, lolu hlelo aluqondi lutho oluvela kulokho okuzwakalayo futhi luvele luchaze izimpendulo zomuntu. Noma kunjalo, u-Eliza wakwazi ukukholisa abaningi abaxhumana naye phambi kobuhlakani bakhe.
Izidalwa Ezinhle, ngo-1994
Isazi sezithombe zekhompuyutha kanye nomcwaningi uCar Sims wadala iqembu lezidalwa ezibonakalayo ezazihlala endaweni yazo yonke. Ngenxa yokuhlelwa kwezakhi zofuzo, bafunda ukubhukuda, ukukhahlela, ukugxuma nokuncintisana omunye nomunye. Ngeshwa, babekhathazekile kakhulu ngempilo yabo yangempela ukuze bakhulume nathi.
I-Deep Blue computer, eyakhiwe yi-IBM, yathola ukuthandwa kakhulu ngemuva kokuwina umdlalo wemidlalo eyisithupha nomdlali wezwe we-chess uGarry Kasparov. Ayikho i-robot eye yazuza imiphumela enjalo ngaphambilini. Kodwa-ke, i-Deep Blue ayikwazi ukwenza ngaphandle kosizo lwabahleli, futhi isebenzisa kuphela izindlela eziyisisekelo zenkolelo yobuhlakani bokufakelwa, ayikwazi ukucabangela ngokugcwele izenzo zayo. Ngemuva kokunqotshwa okukhulu, uGarry Kasparov usolwa ngokumelene nokudlala ngokungalungile futhi wafuna ukukhishwa, kodwa unjiniyela wenqaba umdlali we-chess.
IBM Watson, 2011
IBM Watson waba yi-supercomputer yokuqala ukuhlukunyezwa indoda e-American TV-Imibuzo Engozini! Ikhomputha ehlakaniphile ingakwazi ukuqonda imibuzo eceliwe kuyo futhi ithole izimpendulo kubo kumininingwane yamakhasi angaba yizigidi ezingu-200 ngolwazi olugcwele ama-terabyte angu-4. Imoto idlala ngokumelene noKen Jennings, owabeka irekhodi isikhathi eside sochungechunge lokuwina, noBrad Rutter, owathola ukunqoba okukhulu embukisweni wezingqondo. I-IBM Watson inqobile futhi inqobe imali eyizigidi ezingu-1, kuyilapho izithandani zayo zithola ama-300 no-200, ngokulandelana.
I-Deep-Q Network, ka-2015
I-Deep-Q Network - inkampani yokuthuthukiswa DeepMind, eyakha uhlelo lwe-AlphaGo, iqhawe elihluliwe le-Japanese strategy game. Intelligence Intelligence yafunda ngokuzimela imithetho yama-classic yase-Atari engu-49, ibuka nje esikrinini futhi ingatholi usizo lwabahleli. I-Deep-Q Network ihlangabezane ngokukhululekile nemidlalo eminingi. Kodwa-ke, wayengakaze akwazi ukudlula lo muntu emdlalweni wePac-Man. I-Deep-Q Network yakwazi ukufunda imithetho, kodwa kwakungaphezu kwamandla akhe ukuhlela izenzo zakhe ngemizuzwana embalwa ngaphambili.
I-python - iyini? Ulimi lokuhlela uhlelo oluphezulu
Hlaziya i-PHP: ukuqhathaniswa kwezintambo
Indlela yokuqoqa amadokhumenti e-PDF efayeleni elilodwa: izindlela ezilula
I-Dynamic yamathuluzi msvcp110 dll. Iphutha: yini okufanele uyenze?
Okuwusizo ngenkathi i-loop yomqambi
Into ayisekeli indawo ye-browseforfolder noma indlela: ngiyilungisa kanjani?
"UPawulu Bakery" (Ekaterinburg): incazelo, imenyu, ukubuyekezwa
"Matrix" - a imoto, upende nokunakekela imikhiqizo izinwele
"Sofrino" Park Ihhotela: ikheli, isithombe, ukubuyekezwa
Kanjani a ophephela igesi?
Imali Chinese. imali Chinese: iziqu. imali Chinese: isithombe
Ingabe Moon uzungeza kuma-axis awo azungeze: indlela Ukujikeleza Moon sika
Okugweda sidilizwa yaseGrisi yasendulo: amagama
Kuhlanganiswe okwakhiwa ngalo la mabhodi ophahleni kanye ukungezwani (bheka isithombe). Indlela yokwenza uphahla kuhlangene
Indlela ukupheka iwundlu chops e multivarka
Sevilla ezikhangayo ezikhanga
Indlela ukufaka inkinobho on laptop? Inkinobho ayeka notebook - yini okumele ngiyenze?